किम जोंग उन किन यो ट्रनमा मात्र यात्रा गर्छन्, यस्तो रहेछ कारण र ट्रेनको विशेषता | Rajmarga
किम जोंग उन किन यो ट्रनमा मात्र यात्रा गर्छन्, यस्तो रहेछ कारण र ट्रेनको विशेषता
कयौ दिनको अन्योलपछि अन्ततः उत्तर कोरियाका नेता किम जोंग उनले चीन भ्रमण गरेको स्पष्ट भएको छ। चीन र उत्तर कोरिया दुवैले यो कुराको पुष्टि गरेका छन् । सन् २०११ मा सत्तामा आएयता उनको यो पहिलो विदेश भ्रमण भएको बताइएको छ।
तर यो पुष्टि हुनु अघि नै हरियो डिब्बामा सजिएको एउटा ट्रेन चीन पुगेको थियो, त्यतिबेलैबाट त्यसका उत्तर कोरियाका सबैभन्दा ठुला नेता सवार रहेको आशंका गरिएको थियो ।
यद्यपि यो कुरामा आश्चर्य लाग्न सक्नेछ कि समय बचाउनका लागि संसारका अधिकांश ठुला नेता जब हवाई जहाज र हेलिकोप्टरमा यात्रा गर्दछन् तर उत्तर कोरिया किन उल्टो ?
हवाई यात्रामा डर किन ?
किम जोंगका पिता किम जोंग उललाई पनि हवाई जहाजमा यात्रा गर्न मन पर्दैन थियो । जब उनी सन् २००२ मा तीन साताका लागि रुस यात्रामा गएका थिए, तब उनका साथमा यात्रा गर्ने एक रुसी अधिकारीले यो ट्रेनका बारेमा बताएका थिए ।
यो रेलगाडीमा संसारका सबैभन्दा महंगो वाइन हुन्थ्यो र बारबीक्युको व्यवस्था पनि हुन्थ्यो । ट्रेनमा शानदार पार्टी हुने गर्दथ्यो । किम जोंग इलले यो रेलगाडीबाट करिब १०–१२ पटक यात्रा गरे, जसमा अधिकांश चीनको थियो ।
सिनियर किम टाढाको यात्राका लागि पनि रेलको प्रयोग गर्दथे ।यहाँसम्म कि सन् १९८४ मा उनी रेलगाडीमै पूर्व यरोप गएका थिए । यद्यपि उनको मृत्यु पनि रेलमै हृदयघातका कारण भएको थियो । तर जुन ट्रनमा किम जोंग उन वा उनका पिता यात्रा गर्दथे, त्यो साधारण रेल होइन।
के खास छ यो रेलगाडी ?
न्युयोर्क टाइम्सका अनुसार बेइजिङमा देखिएको यो रेलगाडीमा २१ को थियो र यी सबै हरियो रंगको थियो । यसको झ्यालमा टिन्टेड ग्लास थियो ताकि कसैले बाहिरबाट हेर्न नसकोस भित्र को सवार छ ।
यो रेलगाडीका बारेमा जे जानकारी छ, त्यो खुफिया रिपोर्ट, यो ट्रेनमा यात्रा गरिसकेका अधिकारीहरुको भनाइ र मिडियाका दुर्लभ कभरेजमा आधारित छ।
दक्षिण कोरियाको सन् २००९ को न्युज रिपोर्टअनुसार किम जोंगका लागि उच्च सुरक्षा भएको कम्तीमा पनि ९ कोच तयार रहन्छ । न्युजका अनुसार किमका पिता किम जोंग इलको पालामा जब उनी यात्रा गर्दथे तब तीन ट्रेन चल्दथ्यो । यसमध्ये एउटा एडभान्स्ड सुरक्षा ट्रेन, किमको ट्रेन र तेस्रोमा अतिरिक्त बडीगार्ड सप्लाई हुन्थ्यो ।
सुरक्षाका लागि बुलेटप्रुफ कोच
यसका हरेक डिब्बा बुलेटप्रुफ हुन्छ, जुन सामान्य रेलको कोचको तुलनामा कयौ बढी भारी हुन्छ । बढी तौल भएका कारण यसको गति कम हुन्छ ।एक अनुमानका अनुसार यसको अधिकतम स्पीड ३७ किलोमिटर प्रतिघण्टासम्म हुन्छ ।
२००९ को रिपोर्टअनुसार किम जोंग इलको पालामा १०० सुरक्षा अधिकारीका एडभान्स्ड ट्रेन हुन्थ्यो र त्यसको जिम्मेवारी हुन्थ्या कि स्टेशनमा जाँच गर्नु ।यसका अलवा बढी सुरक्षाकर्मी उपलव्ध गराउनका लागि ट्रेनमाथि हेलिकोप्टर र एयरप्लेनले पनि उडान भर्दथे ।
अर्को एउटा विचित्रको कुरा यो हो कि उत्तर कोरियामा अलगअलग स्थनमा यस्ता २२ रेल्वे स्टेशन बनाइएको छ, जहाँ किम जोंगको व्यक्तिगत प्रयोगका लागि हो ।
ट्रेनको तस्वीर र भिडियो
उत्तर कोरियाको सरकारी मिडियाले पनि कहिलोकाँही ट्रेनभित्र सवार आफ्ना सबैभन्दा ठुला नेताको तस्वीर र भिडियो जारी गर्ने गरेको छ।
सन् २०१५ मा यही ट्रनको एउटा कोचमा किम जोंग उन एउटा लामो सेतो टेबुलमा बसेको देखिएका थिए, जुन एउटा कन्फ्रेन्स रुमजस्तै देखिन्थ्यो ।
सन् २०११ मा जारी यस्तै भिडियोमा उनका पिता पनि त्यसरी नै बसेर कुरा गरिरहेका देखिन्थे । पुरानो भिडियोमा फ्लैट स्क्रीन टेलिभिजन देखिएको थियो र नयाँ भिडियोमा ल्यापटप पनि देखिन्छ ।
किम जोंग उनका विषयमा १३ नोभेम्बर २०१५ मा बेलायती पत्रिका द गार्जियनमा रिपोर्ट छापिएको थियो कि जब उनी देशभित्रको यात्रामा हुन्छन् तब एउटा मोबाइल ट्वाइलेटसमेत हुन्छ ।
डर किन रहन्छ ?
के किम आफ्नो ज्यानका लागि यतिधेरै डराइरहेका छन् ? उत्तर कोरियामा १९९७ देखि १९९९ सम्म भारतका राजदूत रहेका जगजीत सिंह सपराले यस्तो उत्तर दिए–डर त छ । किम मात्र होइन उनका पूर्वजहरु पनि सुरक्षाका विषयमा निकै सतर्क थिए । किम जोंग उनका पिता किम जोंग उल जब मस्को वा बेइजिङ गए तब प्लेन होइन ट्रेनबाट गए ।
सपराले भने–कुनै पनि देशका शासक प्लेनको साटो ट्रेनमा विदेश यात्रा गरे, यसैबाट हामी बुझ्न सक्दछौ कि उनीहरु आफ्नो सुरक्षाका विषयमा कति सतर्क थिए । उत्तर कोरियाको हवाई सम्पर्क मात्र चीनसँग छ। त्यो पनि सातामा दुई दिन बेइजिङबाट प्योङयाङ फ्लाइट आउँछ । यदि तपाई उत्तर कोरिया जानु छ भने पहिला बेइजिङ जानुपर्नेछ ।
सपराले भने कि किम जोंग उनका हजुरबा किम उल सुंगले एकपटक केबल प्लेनबाट इन्डोनेसियाको यात्रा गरेका थिए ।
उनले भने–पूरा देश त अलग् अवस्थामा रहन्छ ।उसको कुनै पनि देशसँग शान्ति सम्झौता छैन । यस्तोमा उनीहरु आफ्नो सुरक्षाकै विषयमा डराइरहन्छन् । अहिले उक्त देशमा जति शोर छ, त्यसको सिधा सम्बन्ध असुरक्षासँग छ। बीबीसी हिन्दीबाट
Previous post: यस्तो छ महिलाले धोका दिएको पत्ता लगाउने सात सूत्र
Next post: आधुनिक प्रविधि नहुँदा सामाजिक सञ्जालमा हुने ठगी गिरोह पक्रन कठिन